तिन महिनामा निकालिने भनीएको सागको खर्च विवरण एक वर्षपछि सार्वजनिक - DURBAR TIMES
HomeSportsतिन महिनामा निकालिने भनीएको सागको खर्च विवरण एक वर्षपछि सार्वजनिक
तिन महिनामा निकालिने भनीएको सागको खर्च विवरण एक वर्षपछि सार्वजनिक
अघिल्लो वर्ष भएको १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)मा १ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ खर्च भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले जनाएको छ। आइतबार राखेपका सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै १३औं साग आयोजना गर्न १ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख ४३ हजार ६१ रूपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए।
सदस्य सचिव सिलवालका अनुसार ३ करोड ५५ लाख ७१ हजार १३७ रूपैयाँ ब्यांक मौज्दात रहेको छ। १ करोड ९३ लाख ८० हजार २२४ रूपैयाँ भने फ्रिज भएको उनले बताए। सरकारले प्रतियोगिता आयोजना गर्न रू. १ अर्ब २३ करोड १८ लाख ४८ हजार दिएको थियो।
टिकट बिक्रीबाट रू. २ करोड ६७ लाख ११ हजार ६७५, विज्ञापनबाट रू. २० लाख ९९ हजार १५० र सहभागी राष्ट्रहरूबाट रू. ११ करोड २१ लाख ३५ हजार ५९८ प्राप्त भएको सिलवालले बताए।
साग प्रतियोगिताको उद्घाट र समापन समारोहमा मात्रै ११ करोड ५९ लाख ८८ हजार ८०४ रूपैयाँ खर्च भएको विवराण राखेपले सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै होटल बसोबासमा १३ करोड ५९ लाख ६७ हजार ६८३ रूपैयाँ खर्च भएको छ।
खेल सामग्री व्यवस्थापनमा २८ करोड २२ लाख ८३ हजार ८८१ रूपैयाँ, राष्ट्रिय टीम व्यवस्थापनमा ३० करोड ८० लाख ८१ हजार ९३९ रूपैयाँ खर्च भएको छ। सचिवालय खर्च (काठमाडौं) ६ करोड ७४ लाख ५६ हजार ४७९, पोखरामा ७ करोड, ६२ लाख ९८ हजार २२४ र जनकपुरमा ८० लाख ३७ हजार २१२ रूपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रतियोगिता सम्पन्न भएको तीन महीनाभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको राखेपले एक वर्षपछि सार्वजनिक गरेको हो। अघिल्लो वर्ष १५–२४ मंसीरमा नेपालको काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा खाग भएको थियो।
Previous articleबोको हरामको आक्रमणबाट कम्तीमा ४३ जना किसानको हत्या
Next articleबायर्नको पुनरागमन जित, डर्टमण्ड घरेलु मैदानमै पराजित